သင့်ကွန်ပျူတာ Hack ခံရနေပြီလားဆိုတာသိနိုင်မည့် နည်းလမ်း ၁၂ ခု | Myanmar Mobile App
Home Trending Enterprise သင့်ကွန်ပျူတာ Hack ခံရနေပြီလားဆိုတာသိနိုင်မည့် နည်းလမ်း ၁၂ ခု
သင့်ကွန်ပျူတာ Hack ခံရနေပြီလားဆိုတာသိနိုင်မည့် နည်းလမ်း ၁၂ ခု
ဆိုင်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီး လူတိုင်းဟာမိမိရဲ့ အချက်အလက်တွေလုံခြုံရေး အတွက်စိုးရိမ်ကြရပါတယ်။ သင့်ရဲ့စကားဝှက်တွေ နဲ့အခြားသောအရေးကြီးအချက်အလက်တွေ ခိုးယူခံရခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရန် သင့်ကွန်ပျူတာတွင်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အပြောင်းအလဲများကို သတိထားသင့်ပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးလေးကနေ သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာ Hack ခံရပြီလားဆိုတာကို သိနိုင်မည့်နည်းလမ်းများအား ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။ သင့်ကွန်ပျူတာတစ်ခုခုမူမမှန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပါက ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြပါဦးမယ်။
၁၂. Antivirus Software ကိုပိတ်နေခြင်း
သင့်ကွန်ပျူတာမှ Antivirus Software မှာသင်ပိတ်ထားခြင်းမရှိဘဲ အလိုအလျောက်ပိတ်နေပါက သင့်ကွန်ပျူတာ Hack ခံနေရဖို့များပါတယ်။ သူ့ဘာသာသူတော့ပိတ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဟက်ကာများ ပထမဆုံးပြုလုပ်သောအရာမှာ Anitvirus Software များပိတ်ပစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့မှသာ သင့်ဆီမှ အချက်အလက်များ ကိုခိုးယူနိုင်မှာမို့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
သင်ကိုယ်တိုင် သင့်စကားဝှက်ကိုမပြောင်းထားပေမယ့် သင့် account ထဲသို့ဝင်ရောက်သည့်အခါ ၀င်မရဖြစ်နေပါတယ်ဆိုပါက သင်သတိထားသင့်ပါပြီ။ သင့်ကွန်ပျူတာ Hack ခံနေရနိုင်ချေရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
သင့် Social Media Account မှသင်မသိသည့် သူငယ်ချင်းအရေအတွက်ရုတ်တရတ်များလာတာကို သတိထားမိပါက သင့် Account ကိုခိုးယူဝင်ရောက်နေပြီဖြစ်ပြီး Spam တွေပို့ဖို့အသုံးပြုခံနေရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
၉. သင့် Dashboard တွင် Icon သစ်များပေါ်လာခြင်း
သင် Browser ကိုဖွင့်လိုက်သည့်အခါ သင့် Dashboard တွင် icon သစ်များပေါ်လာသည်ကိုသတိထားမိပါက သင့်ကွန်ပျူတာထဲကို အန္တရာယ်ရှိသည့် Code တစ်ချို့ဝင်ရောက်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
၈. Cursor အလိုအလျောက်ရွေ့လျားနေခြင်း
သင့်ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်တွင် Cursor မှာအလိုအလျောက်ရွေ့လျားနေတာကိုတွေ့ရပြီး တစ်ခုခုကို Hightlight လုပ်နေသည်ဆိုပါက သင့်ကွန်ပျူတာသေချာပေါက် Hack ခံနေရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
၇. သင့် Printer ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အလုပ်မလုပ်ခြင်း
ဆိုင်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာကွန်ပျူတာကိုတင်မဟုတ်ပါဘူး သင့် Printer အပေါ်ပါသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဥပမာ Printer မှသင်ခိုင်းစေလိုက်သည့်အတိုင်းမပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် သင်မထုတ်ခိုင်းသည့်စာရွက်တွေကို ထုတ်ပေးခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
၆. အခြားသော ၀က်ဆိုက်တွေဆီကိုလွှဲပစ်ခြင်း
သင့်ကွန်ပျူတာ Browser မှအခြားသောဝက်ဆိုက်တွေဆီကိုသွားခိုင်းနေပါက သတိထားရတော့မှာပါ။ Search Engine တွင် Google Page ကိုသွားရန်စာရိုက်လိုက်သော်လည်း အခြားသင်မသိသည့်ဝက်ဆိုက်စာမျက်နှာ သို့ရောက်ရှိသွားပါကလည်း သတိထားရတော့မှာပါ။ သင့်ကွန်ပျူတာတွင် Widow များအဆက်မပြတ်ပေါ်လာနေပါက သင့်ကွန်ပျူတာသေချာပေါက် Hack ခံနေရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
၅. File တွေဖျက်ပစ်ခံနေရခြင်း
သင့်ကွန်ပျူတာမှ Program တွေ၊ File တွေကိုသင်မသိလိုက်ဘဲဖျက်ပစ်ခံနေရပါက သင့်ကွန်ပျူတာ သေချာပေါက် Hack ခံနေရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
၄. သင်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တွေအင်တာနက်ပေါ်ရောက်နေခြင်း
သင့်ရဲ့Browser ကနေတဆင့်ဒီကိစ္စကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါဦး။ သင့်အွန်လိုင်းပေါ်တင်မထားဘဲ သင့်အကြောင်းတွေကိုရောက်နေသလားစစ်ဆေးကြည့်လိုက်ပါ။ သင့်တွေ့ပြီဆိုရင်တော့ သင့်အချက်အလက်တွေကို ခိုးယူဖို့ ကွန်ပျူတာ Hack ထားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
၃. Antivirus Warning အတုများလက်ခံရရှိခြင်း
သင့်အနေနဲ့ ပုံမှန်မဟုတ်သည့် Antivirus Warning ကိုတွေ့ရှိရပါက ဒါဟာ Hack ခံရခြင်းရဲ့လက္ခဏာပါပဲ။ နောက်ထပ်မကောင်းတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုကတော့ သင် install လုပ်မထားတဲ့ Antivirus Software ကိုကွန်ပျူတာတွင် တွေ့ရှိရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၂. ပုံမှန်မဟုတ်သည့် ကွန်ပျူတာကင်မရာ၏အပြုအမူများ
သင့်ကွန်ပျူတာ WebCam ကိုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်ပါဦး။ကင်မရာဘေးမှ အချက်ပြလေးဟာသူ့ဟာသူ အလိုအလျောက်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်နေပါက ကွန်ပျူတာကို Restart ပြန်လုပ်ပြီး ထိုသို့ထပ်မံဖြစ်မဖြစ် ၁၀မိနစ်ခန့် စောင့်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေဆဲဆိုရင်တော့ သင့်ကွန်ပျူတာ Hack ခံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ကွန်ပျူတာတွင်အရိုးရှင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်လေးကိုပင် အချိန်ကြာမြင့်စွာပြုလုပ်နေရခြင်း၊ သင့်အင်တာနက်အမြန်နှုန်းသိသိသာသာကျဆင်းသွားခြင်းများရှိပါက သင့်ကွန်ပျူတာတွင်းသို့ ခိုးဝင်ရောက်နေနိုင်ချေ ရှိနေပါပြီ။
သင့်ကွန်ပျူတာ hack ခံနေရကြောင်းကိုသင့်သူငယ်ချင်းများနှင့် အခြားသူများကိုအီးမေးလ်ပို့ပြီးဖြစ်စေ သတိပေးပါ။ သင့်ဆီမှ မည်သည့်message၊ မည်သည့် Link များကိုမဖွင့်ရန်သတိပေးပါ။
သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များပေါက်ကြားနိုင်ချေရှိကြောင်း သင့်ဘဏ်ကိုအကြောင်းကြားပါ။ သင့်ငွေကြေးများကိုကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းရှာပါ။
သင်မသိသည့် Program များ၊ သင်အသုံးမပြုသည့် Programများကိုဖျက်ပစ်ပါ။
ယုံကြည်စိတ်ချရသည့် Antivirus Software တစ်ခုကို Install ပြုလုပ်ပြီး သင့်ကွန်ပျူတာကိုစစ်ဆေးပါ။ အချို့သောကုမ္ပဏီများက Trail Version ထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်။
သင့် account များမှ စကားဝှက်အားလုံးကိုပြောင်းလဲပစ်ပါ။
Previous articleSamsung ရဲ့ အနာဂတ်စမတ်ဖုန်းတွေမှာ ကျောဖက်တွင်ပါ Display ထည့်သွင်းလာနိုင်
Next articleမျက်နှာပြင်အောက်က လက်ဗွေရာစနစ်ကို ပြသလိုက်တဲ့ Vivo ဖုန်း